October 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Floods Leave Hundreds of Thousands of Somalis Needing Aid – VOA News
Somali News October 31, 2019
Floods Leave Hundreds of Thousands of Somalis Needing Aid VOA NewsSii akhriso
Taageerayaasha Arsenal oo xushay xiddiga ay u arkaan inuu u qalmo inuu noqdo kabtanka joogtada ah ee kooxda
Cayaaraha October 31, 2019
(London) 31 Okt 2019. Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa wxay xalay u aheyd habeen niyadjab ah, kaddib markii ay isaga soo hareen koobka Carabao Cup, kulan aad u xiiso badnaa ay naadiga Liverpool ku wada ciyaareen garoonka Anfield. Liverpool ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay Arsenal kaga adkaatay, rigoorayaal 5-4 ah, […]Sii akhriso
Soomaaliya October 31, 2019
Muqdisho(SONNA) Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo Madaxda Bangiga Hormarinta Afrika kala hadlay, sidii ay gacan uga geysan lahaayeen Deyn Cafinta Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda Dowlaadda Federaalka ee Soomaalia Dr C/raxmaan Ducaale Beyle oo kusugan Magaalada Abidjan ee Dalka Ivory Coast ayaa kulan u kula yeeshay gudoomiye ku xigeenka Bangiga Hormarinta Afrika waxay kaga Sii akhriso
(Manchester) 31 Okt 2019. Weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Manchester City ee Sergio Agüero ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in go’aankii uu ugu biiray sky blue uu yahay mid ka mid ah go’aamada ugu muhiimsan ee noloshiisa. 31 jirrakan reer Argantina ayaa yimid kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii 2011, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay naadiga Atletico […]Sii akhriso
Golaha wasiirada oo ansixiyay miisaaniyadda Dowladda ee 2020
Muqdisho(SONNA) Golaha wasiirrada ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay ku tala galka miisaaniyadda dawladda ee sannadka 2020 oo dhan $459.5 Milyan. Kororka ku yimid miisaaniyadda 2020, badankeed waa mushaar loo kordhiyay ciidamada qalabka sida oo askari waliba uu heli doono mushaar dhan $200 bil waliba. Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulanka guddoominayay Sii akhriso
(Argantina) 31 Okt 2019. Liiska xulka qaranka Argentina ayaa lagu dhawaaqay goor dhow, kuwaasoo ka qeyb galaya kulammada soo socda ee ay ciyaarayaan bisha November. Argentina waxay shaacisay liiska ugu dambeeyay ee xiddigaheeda ay ku wajaheyso bisha November xulka qaranka Brazil, iyadoo Lionel Messi uu dib ugu soo laabtay xulka uu kabtanka u yahay, kaddib markii […]Sii akhriso
(Manchester) 31 Okt 2019. Manchester United ayaa ku dhawaaqday saddexda xiddig ee ku tartamaysa abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bisha October ee kooxda, kuwaasoo kala ah Rashford, James & McTominay. Marcus Rashford ayaa hoggaaminaya xiddigahan kaasoo afar kulan u dhaliyay lix kulan uu u ciyaaray bishan, waxaana goolashaas ka mid ahaa 2 gool uu ka dhaliyay Sii akhriso
Garowe(SONNA) Today, I am very happy to visit the beautiful Puntland, one of the important states in Somalia. On behalf of the Chinese Embassy, I would like to take this opportunity to extend cordial greetings and good wishes to the government and people of Puntland State, and sincerely thank the government and people of Puntland […]Sii akhriso
DDS October 31, 2019
Mudooyinka danbaba waxaa jiray cabashooyin badan laga soo sheegayo adeeg bixinta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha, gaar ahaan xarunta ay ku leedahay magaalada Jigjiga. Taas oo dadka u doonta xarunta baasa boorka ay sheeganayeen rafaad iyo adeeg xumo inay kala kulmaan meeshaas. Hadaba madaxwaynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafe Muxumed Cumar, oo ka duulaya Sii akhriso
Shaqooyinka October 31, 2019
Organization: International Organization for Migration Country: Ethiopia Closing date: 31 Oct 2019 Position Title : Information Management Officer (EUTF) Duty Station : Addis Ababa, Ethiopia Classification : Professional Staff, Grade P2 Type of Appointment : Special short-term graded, Six months with possibility of extension Estimated Start Date : As soon as possible Sii akhriso